I-RPi-VK-Drayivu: Isilawuli seGPU esineVulkan Support yamaLifa eRPI Boards | Kusuka kuLinux
Esikhathini esithile esidlule, isisekelo se-Raspberry Pi, kanye ne-Igalia, kwaziwe ukusebenzisana nomphakathi wonkananoma ekwakhiweni komshayeli weVulkan wamabhodi eRaspberry Pi lapho ekuqaleni babethi lokhu kuzohambisana kuphela nebhodi elisha kakhulu eliyi "Raspberry Pi 4" futhi baqala kanjalo-ke isigaba sokuqala sentuthuko futhi elingasho usuku oluthile lokuthi luzolunga nini isilawuli noma mayelana nokuthi kungakulungela nini ukwethula ezinye izinhlelo zokusebenza zangempela.
Ukuphela kwento abayishilo ukuthi lokhu kungenzeka engxenyeni yesibili ka-2020, ngaphakathi kokucaciswa kwesilawuli Kwashiwo ukuthi lokhu kukhawulelwe ku- Ukuxhaswa kwe-VideoCore VI ye-accelerator, isetshenziswe kusuka kumodeli we-Raspberry Pi 4 futhi lokho bekungeke kuhambisane namapuleti amadala, okungukuthi kusuka kumodeli engu-3b + emuva balahlwa.
Ngaphezu kwalokho, basho ukuthi, uma kuqhathaniswa ne-OpenGL, ukusetshenziswa kweVulkan kungathuthukisa ukusebenza kwezinhlelo zokusebenza zemidlalo nemidlalo.
Ngalezi zindaba, abalandeli abaningi nabanikazi be-Raspberry Pi ebingeyona imodeli 4, badumele ngoba bezwe ukuthi babekwa eceleni nokuthi bamemezele ukuthi akusafanele ukusebenza ukuqhubeka nokuxhasa noma yiliphi lala mabhodi.
Kepha, manje ezindabeni zakamuva nje, kubonakala sengathi izinto sezishintshile njengoba unjiniyela eza ukuzofakazela okunye.
Mayelana ne-RPi-VK-Driver 1.0
UMartin Thomas, unjiniyela we-NVIDIA wayebhekele ukuthuthukiswa kwe-RPi-VK-Driver okuyisilawuli esivulekile esithi ngamagama ombhali waso:
"Isilawuli sakhiwe ngu, noma kunjalo intuthuko yenziwa njengephrojekthi yomuntu siqu, engahlangene neNVIDIA (isilawuli sakhiwa eminyakeni emibili edlule ngesikhathi saso sokuphumula)."
Le nguqulo yokuqala Umshayeli ovulekile we-RPi-VK-Driver 1.0 usatshalaliswa ngaphansi kwelayisense ye-MIT naku- Ukusekelwa kweVulkan graphics API kuyasetshenziswa yamabhodi we-Raspberry Pi amadala athumela nge-Broadcom Videocore IV GPU.
Isilawuli Ifanele wonke amamodeli webhodi ye-Raspberry Pi akhishwe ngaphambi kwe-Raspberry Pi 4.
Kumamodeli asekelwayo, okulandelayo kushiwo endaweni yokugcina izinto:
1 imodeli A
1 imodeli A +
1 imodeli B
1 imodeli B +
2 Isibonelo B
3 Isibonelo A +
3 Isibonelo B
3 Imodeli B +
Ikhompyutha Module 3
Ikhompyutha Module 3 lite
Ikhompyutha Module 3+
Ikhompyutha Module 3+ lite
Kusukela amandla weVideoCore IV GPU, anemodeli yakudala ye-Raspberry Pi, akwanele ukuqaliswa okugcwele kweVulkan, isilawuli sisebenzisa kuphela i-subset ye-Vulkan API, engafaki yonke indinganiso, kepha zama ukuyilandela kuze kufike lapho iqembu livumela khona.
Nokho, ukusebenza okutholakalayo kwanele ezinhlelweni eziningi nemidlalo, nokusebenza kusebenza phambili kakhulu kwabashayeli be-OpenGL ngenxa yokuphathwa kwememori okusebenzayo, ukucubungula imicu eminingi yemiyalo ye-GPU, nokulawulwa okuqondile kokusebenza kwe-GPU.
Isilawuli futhi sisekela imisebenzi efana ne-MSAA (Isampula yokulwa nokuhluza), izithunzi ezisezingeni eliphansi namabala wokusebenza. Emikhawulweni, kunokuntuleka kokwesekwa kwezithunzi ze-GLSL, ezingakatholakali kulesi sigaba sokuthuthuka.
Ngokuqondene nombhali, singagqamisa ukuthi wayebhekele futhi nokushicilela itheku lomdlalo iQuake 3 yeRaspberry Pi, esebenza njengombukiso wamakhono wesilawuli esisha.
Umdlalo usekelwe enjini ye-ioQuake3, engezwe i-modular rendering backend ngokususelwa kuVulkan, eyaqalwa yaphrojekthi yeQuake III Arena Kenny Edition. Ngokusebenzisa isilawuli esisha emdlalweni, bekungenzeka ukuthi kunikezwe ngaphezulu kwamafreyimu ayi-100 ngomzuzwana (FPS) ebhodini leRaspberry Pi 3B + kokukhishwa kwe-720p.
Ekugcineni, maqondana nokusetshenziswa kwalesi silawuli kanye nokwazi imininingwane eminingi ngakho, bangabheka indawo yokugcina isilawuli ku- isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-RPi-VK-Drive: isilawuli se-GPU esisekela i-Vulkan samabhodi we-RPI amadala
I-Tsunami Security Scanner isivele ingumthombo ovulekile, iGoogle yanquma ukuthi kunjalo